तपाईं–हाम्रो दैनिक जीवनमा प्लास्टिक अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ तर यो यति हानिकारक छ कि सबै जसो समुद्रका प्राणीको काल बन्न पुगेको छ।
न्युयोर्कमा मुसा आतंक
न्युयोर्कमा मुसा आतंक ठूलो कुरा होइन। यत्र, तत्र, सर्वत्र यो सानो जीव दौडिरहेको हुन्छ। यस पटकको आतंक यी साना मुसाको होइन, ठूलै मुसाको चलिरहेको छ।
प्रदर्शनीको केरा, तेरा न मेरा
अमेरिकाको मियामीमा प्रदर्शन गरिएको एक कला प्रदर्शनीमा सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नेमध्येमा एउटा केरा पनि थियो। प्रदर्शनी हेर्न आएका दर्शक जहिले पनि केरालाई भित्तामा टाँसेको देखेर मुख छोपीछोपी हाँस्थे।
टोपीलाई युनेस्को सम्मान
किर्गिस्तानमा पुरुषहरुले लगाउने एक प्रकारको टोपीलाई युनेस्कोले अमूर्त सम्पत्ति भनी मान्यता दिएको छ। ‘एक–कल्पक’ नामक यो टोपीका कारण किर्गिस्तानको पर्यटनमा बढावा दिने अपेक्षा त्यहाँका जनताको छ।
यसपालि क्रिसमसमा तपाईंले सान्ता क्लजसँग तपाईंले के बरदान माग्नुभयो ? बेलायतस्थित केइला सेभेरीले भने सान्तासँग कुकुर मागेकी छन्।
कट्टु प्रदर्शनीले विवाद
नेदरल्यान्डको एउटा सुपरमार्केटले आफ्नो प्रचारका लागि नयाँ जुक्ति सोचेको छ। उसले आफ्नो सुपरमार्केटको प्रचारका लागि कट्टु प्रदर्शनी आयोजना गरेको थियो तर यति आलोचना भयो कि प्रदर्शनी नै रद्द गर्नुप-यो।
पुलिस म्युजियममा डकैती
खासमा डकैती गर्न त बैंकमा जानुपर्ने हो, एउटा समूह भने जर्मनीको पुलिस म्युजियममा पुगेका छन्। बर्लिनस्थित स्टासी म्युजियम जर्मनीको एकीकरणअघि कम्युनिस्टहरुको शासन रहेको पूर्वी जर्मनीअन्तर्गत पथ्र्यो।
नौ वर्षे बालकको डिग्री पढाइ
अधिकांश नौ वर्षे बालक टेलिभिजन र मोबाइलमै समय गुजार्छन् तर बेल्जियमका एक बालक लरेन्स सिमोन्स भने अर्कै देशमा गएर संसारकै कम उमेरका स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने बालकका रुपमा कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन्।
जिससको अश्लील हर्कत !
यतिबेला सोसल मिडियामा एउटा तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। जसमा जिसस क्राइस्टको तस्बिरमा गम्भीर गल्ती भएको पाइएको छ। कुनै चर्चको भित्तामा कोरिएको चित्रमा मेरी र जिसस क्राइस्ट देखिन्छन्। तस्बिरमा क्राइस्टको हातले आफ्नो गुप्ताङ्क चलाइरहेको महसुस हुन्छ।
कडा सुरक्षाका बीच किताब गायब !
अहिले अमेरिकामा केही विशेष किसिमका किताबहरु अमेरिकामा गायब हुन थालेका छन्। एक वर्षयता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरोधी किताबहरु पुस्तकालयका -याकबाट गायब हुन थालेका हुन्। कडा सुरक्षाका बीच कसरी यस्तो भयो भनी खोजी हुन थालेको छ।
जेम्स बोन्ड लेखकका रंगीन चिठ्ठी
जेम्स बोन्ड शृंखलाका चर्चित लेखक इयान फ्लेमिङले आफ्नी पत्नी एनलाई लेखेका अश्लील चिठ्ठीहरु यतिबेला बेलायतमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ।
गोहीले आक्रमण गरे के गर्ने ?
अन्य सामान्य दिनझैँ अस्ट्रेलियाका वन्यजन्तु रेन्जर क्रेग डिकम्यान पोखरीमा माछा मार्न गएका थिए। उनको बल्छीमा त्यो दिन माछा परेन, गोही प-यो र यति माप्पाको गोही प-यो कि उनलाई आक्रमण नै गर्न तम्सियो।